United States ụkpụrụ ekpuchi azụmahịa ozi email ozi na-usoro 2003 n'okpuru Federal Trade Commission nke CAN-SPAM Act. Ezie na ọ karịrị afọ iri… M ka na-emeghe igbe mbata m kwa ụbọchị na-achọghị na email nwere ma ụgha ozi na-enweghị usoro iji pụọ. Amaghị m na otu iwu si dị irè na-enwe ihe iyi egwu nke ihe ruru $ 16,000 maka iwu ọ bụla.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Iwu CAN-SPAM anaghị achọ ikike iji zipu ozi email iwu izi ozi azụmahịa nke mba ọzọ eguzobewo. Ihe ọ chọrọ chọrọ bụ na onye nnata ahụ nwere ikike ka ị kwụsị iziga ha ozi. A maara nke a dị ka usoro nwepu aha, nke a na-enye site na njikọ wepu aha na-esonye n'ụkwụ email.
a Nduzi ndi mbido na CAN-SPAM Act si EverCloud ga-enye gị ozi niile ị chọrọ ịma iji hụ na ị na-erubere iwu isi.
Gbaa mbọ hụ na ị na-agbaso iwu CAN-SPAM bụ ihe mbụ ị ga - eme iji nweta ozi ịntanetị gị site na nzacha ozi email na igbe nnabata gị. Nnabata na CAN-SPAM apụtaghị na email gị ga-eme ya na igbe mbata, ọ bụ ezie! Enwere ike ịdebanye aha gị na igbochi, ma ọ bụ zigara gị na folda junk dabere na nnapụta gị, aha gị, na ntinye igbe. Ga-achọ ọrụ nke atọ 250ok maka nke ahụ!